Fanahy Kalifornia iray - Ho avy ny fanjakany - Countdown ho an'ny Fanjakana
Tamin'ny 11 septambra 2020, io fanahy Kalifornia io dia "nahita" ny isa 339 avy amin'ny Boky manga, hafatra nomena am-boalohany Fr. Stefano Gobbi tamin'ny 23 Novambra 1986 tao amin'ny Fetin'ny Kristy Mpanjaka ao Fort Lauderdale, Florida.
Ny làlana izay mitondra anao mankany amin'ny fanjakany
Androany, amin'ny voninahitry ny Paradisa sy amin'ny ady manadio an'ny Purgatory, dia manaiky ny fanajana ny fiangonana mpivahiny rehetra eto an-tany aho, mba hanolorako, miaraka aminareo rehetra, ny satroboninahitry ny maha-mpanjaka an'i Jesosy Kristy Andriamanitsika, Mpamonjy antsika sy Mpanjakantsika.
Jesosy dia tsy maintsy manjaka ambonin'ny olona rehetra ao am-po sy amin'ny fanahin'ny rehetra, satria hajan'ny fahasoavana, masina ary fitiavana izy. Rehefa manjaka ao amin'ny fanahin'ny zavaboary iray i Jesosy dia niova tamin'ny fahazavana masina iray izay manome azy io ho lasa tsara tarehy, manjelanjelatra, masina ary tian'Andriamanitra. Ho an'ity, ny andraikitro amin'ny maha-reny ahy dia ny fandroahana lavitra ny fanahin'ny zanako ny aloky ny ota rehetra, ny fandrika rehetra na inona na inona fitiavan-tena, na inona na inona filan'ny filan'ny nofo, mba hitarihana ny olona rehetra amin'ny lalan'ny fahamasinana lehibe.
Avy eo i Jesosy dia tena afaka mametraka ny Fanjakany ao am-ponao sy ao amin'ny fanahinao ary ianao dia ho lasa faritra sarobidy amin'ny fanjakany masina. Jesosy dia tsy maintsy manjaka ao amin'ny fianakaviana, izay tokony hisokatra tahaka ny kiborin'ny mason'ny mpanjaka, noho izany antony izany, miasa aho amin'izao fotoana izao, mba hitomboan'ny fianakaviana, ny firindrana sy ny fandriampahalemana, ny fahatakarana sy ny fifanarahana, ny firaisankina ary mendri-pitokisana. Jesosy dia tsy maintsy manjaka amin'ny zanak'olombelona rehetra, mba ho lasa zaridaina vaovao indray izy io mba hahazoan'ny Trinite Masina Indrindra ny hatsarana sy ny hatsarana, ny fitiavana ary ny hanitra avy amin'ny zavaboary rehetra, ka homem-boninahitra ary hametraka ny fonenana mahazatra azy eo afovoanao. Ho an'izany dia miasa mahery aho anio hitarika ny olombelona rehetra amin'ny lalan'ny fiverenana amin'Andriamanitra, amin'ny alàlan'ny fiovam-po, amin'ny vavaka ary amin'ny fivalozana.
Ary izaho tenako dia mitarika ny antokon'olona, ​​nantsoina hiady amin'ny tafiky ny faharatsiana mba ho resy haingana araka izay tratra ny fahefan'izay mandà sy miteny ratsy an'Andriamanitra ary miasa tsy an-kijanona amin'ny fananganana sivilizansa tsy misy azy.
Jesosy dia tsy maintsy manjaka ao amin'ny Fiangonana, ilay ampahany manan-tombo amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy feno fitiavana. Azy ny Fiangonana satria teraka tamin'ny fofonain'ny fony izy, notezaina tao amin'ny Fitiavany, nosasaina tamin'ny Ràny, notohanan'ny fanekem-pahatokiana tsy fivadihana mandrakizay. Noho izany antony izany dia miasa amin'ny maha Reny aho, amin'izao fotoana maharary amin'ny fanadiovana azy izao, hanadiovana ny fiangonana indray avy amin'ny tasy rehetra, hanafaka azy amin'ny fanekem-pinoana ataon'ny olombelona rehetra, hiaro azy amin'ny fanafihana an-kolaka ataon'ny Fahavalony sy ny tariho amin'ny làlan'ny fahalavorariana Izy, mba ho taratry ny tarehin-javatra rehetra ny famirapiratan'ny Vadiny masina, Jesosy.
Ny fihetsika ataoko ho reny dia manomana, amin'izao fotoanao izao, ny fahatongavan'ilay Fanjakana be voninahitr'i Jesosy Zanako. Ny My Immaculate Heart no làlana izay mitondra anao mankany amin'ny Fanjakany. Raha ny marina, ny fandresen'ny Foko Malalaka dia hifanindry amin'ny fandresen'i Jesosy Zanako, amin'ny Fanjakany be voninahitra sy fahasoavana, fitiavana sy fahamarinana, famindram-po sy fiadanam-po, izay haorina eo amin'izao tontolo izao. . Ary noho izany antony izany no iangaviako anao anio hivavaka sy hatoky, miantso anao amin'ny fiadanam-po sy ny fifaliana aho satria efa eo am-bavahady ny Fanjakan'i Jesosy Tompo be voninahitra.
Posted in Fanahy any Kalifornia, Messages.
← Apôstôly amin'ny andro farany
Gisella Cardia - Ny ady… →